Ahoana no hamonjena vola rehefa mitsidika an'i Kanada?
Misy fomba maro hamonjena amin'ny fitsidihanao an'i The White White North
Na dia amin'ny fanaovana planina tsara aza, dia mety mora foana ny fandaniana amin'ny dia: ny hetra avy any ivelany, ny fitsangatsanganana, ny fihenam-bidy tsy miova ary ny fandaniana hafa dia mety hikorontana ny teti-bola. Na dia anisan'ireo firenena manan-karena indrindra ao Kanada aza i Kanada, dia tsy afaka ny tsy mandeha amin'ny lisitr'ireo fomba hitehirizana ny vola ianao raha tsy manolotra ny kalitaon'ny dianao.
Eritrereto hoe mankany amin'ny seranam-piaramanidina hafa
Maro amin'ny tanàna malaza any Kanada no ao anaty fiara mety amin'ny sisin-tanin'i Etazonia.
Ohatra, Seattle dia fiara adiny roa avy any Vancouver ary ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenenan'i Buffalo dia somary akaiky kokoa an'i Toronto . Ampitahao ny sidina ho an'ny sidina mankany amin'ireo seranam-piaramanidina Amerikana; Tsy vitan'ny hoe mety ho mora kokoa ny fiaramanidina, fa mety hahita savings amin'ny parking, car rentals, trano fandraisam-bahiny sy trano hafa ivelan'ny tanàna lehibe.
Eritrereto ihany koa ny manidina any amin'ny tanàna madinika ivelan'ny tanàn-dehibe. Ohatra, ny fiaramanidina dia mety hisidina any amin'ny seranam-piaramanidin'i Hamilton - 45 min avy ao Toronto - izay tsy misy ao amin'ny seranam-piaramanidin'ny seranam-piaramanidin'i Pearson any Toronto.
Ny fizaran-taona any Canada dia azo oharina amin'ny an'ireo any Etazonia - ny fahavaratra dia ny fotoam-pahavaratra toy ny Christmastime sy ny fialan-tsasatra (izay miovaova amin'ny faritany).
Ny Thanksgiving Amerikana amin'ny volana Novambra dia manolotra vintana tsara ho an'ny savaranon-tsakafo any Canada, satria ny Thanksgiving Canada amin'ny Oktobra sy Novambra dia any Kanada no fialan-tsasatra mahazatra.
Fotoan-tsarotra hafa ho an'ny tahiry ny fifanintsanana fifanintsanana amin'ny fifaninanana skipana Amin'ny volana janoary sy ny lohataona amin'ny volana jona.
Manamboara Tanàna lehibe ny dianao ary mijanòna any amin'ny tanàna madinika
Iray amin'ireo tombony avy amin'ireo tanàna any Kanada ny hoe afaka mandeha lavitra any amin'ny tanàna kely sy vatan-drano kely ary fanasana ireo ambanivohitra. Eritrereto ny mijanona ao amin'ny tanàna mora vidy kokoa ivelan'ny tanàn-dehibe raha tokony handoavana dollar ho an'ny hotely, trano fisakafoanana, parking, sns.
Ataovy sakafo ny sakafonao
Ny trano fisakafoanana dia tera-bola be mpahalala indrindra any Kanada. Na dia tsy sarotra be aza ny mandeha amin'ny ankapobeny, dia manana sakafo sy zava-pisotro be dia be i Kanada, noho ny hetraketraky ny fanjakana. Na izany aza, ny fiaraha-misakafo amin'ny ora fatoriana dia manome fahafahana tsara hisakafo miaraka amin'ny fihenam-bidy
Hevero ny fonenanao
Ny hotely dia trano fidiovana be indrindra saingy te-hijery ny vidin'ny fitsangatsanganana raha midika hoe mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Soa ihany ireo mpizahatany mitsitsy vola any an-trano, misy fitomboana mihamitombo ny tranokala fanatanjahan-tena, toy ny HomeAway, FlipKey ary mijery ny tsena eny an-tsena, toy ny Airbnb na HouseTrip. Amin'ny fanofana trano misy anao, dia mety hiafara amin'ny famatsiana ny fandaniana toy ny fiara mijanona, manosika, misakafo, ary WiFi.
Boky faran'ny herinandro ao amin'ny hotely fandraisam-bahiny mankany amin'ny mpivarotra
Ireo trano izay miala amin'ny mpizaha tany sy ny seranam-piaramanidina akaiky dia matetika mahavaky kokoa ny Alatsinainy ka hatramin'ny Alakamisy ary tena mampihena ny taham-pony amin'ny faran'ny herinandro mba hahasarika kokoa ny mpandeha sasatra. Diniho ny famandrihana izany mandritra ny andro faran'ny herinandro.
Ankoatra izany, misy hotely any amin'ny seranam-piaramanidina dia mety hametraka anao any amin'ny toerana lehibe hitsidihana toerana maromaro eto an-toerana amin'ny vidiny mora kokoa, ary angamba amin'ny fiara tsy mataho-dalana.
Ohatra, ny fijanonana ao amin'ny hotely Toronto Airport dia mametraka anao eo anelanelan'ny afovoan-tanànan'i Toronto (20 minitra eo ho eo) sy ny Riandranon'i Niagara (eo amin'ny adiny iray eo an-dalana).
Mitondrà tombontsoa amin'ny tranonkala coupon
Rehefa mikasa ny hanomana ny fialan-tsasatrao ianao dia mety hikaroka ny tsara indrindra amin'ny fiaramanidina na fiarandalamby mampiasa fitaovana an-tserasera toy ny Expedia, RedTag na Trivago, saingy mila manomboka manangom-bola fotsiny isika rehefa tonga any amin'ny toerana misy anay. Tsy manana safidy isika. Fa ny tapakila an-tserasera dia manolotra tontolo feno tahiry ho an'ny mpandeha.
Ireo tranonkala malaza, toy ny Groupon, WagJag, ary RedFlagDeals dia manome tahiry amin'ny sokajy isan-karazany, toy ny mahazatra, ny sakafo, ny fitaterana, ny hotely, ny fitsangantsanganana, ny spa-spa sy ny hafa.
Ny ankamaroan'ireo tanàn-dehibe any Kanada dia manana fihenam-bidy izay manolotra anao amin'ny famerenana ny fidirana amin'ny toerana lehibe ho an'ny vidiny mora na amin'ny alalan'ny mpamatsy toy ny CityPass na ny biraon'ny fizahantany ao an-toerana.
Inona no tokony atao amin'ny ririnina any Kanada
Ny 8 amin'ireo zavatra faran'izay henjana indrindra azonao atao any Kanada
Torohevitra ho an'ny fitondrana ao amin'ny Provinces Maritimes any Kanada
'N' Phoenix Wild
Safidy fisakafoanana be dia be ao amin'ny sekretera rehetra ao Jamaika
Ireo ala tsara indrindra nitsidika ny fanjakana Washington
Fitiavana fisaorana tsara indrindra any Reno
Top 5 Picks ho an'ny mpankafy an'i Mickey Mouse ao amin'ny Disney World
Fidio ny Edinburgh Fringe - Hevitra Misongadina ho an'ny 2016
Ahoana ny fandehanana any Kiobà raha Amerikana ianao?
Ny fampahalalam-baovao Denver
Nahoana ianao no mila manisy tombo-kase
Vonjeo ny vola amin'ny Free Shopping tany Missouri
Panto Taona 2017/2018 - Jereo ny zava-misy eo amin'ny UK